Ny tranonkala Samsung dia manivana ny sary ofisialy voalohany an'ny Galaxy Watch | Androidsis
Iray amin'ireo fitaovana niresahantsika indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy, ary tsy smartphone izany, dia ny Galaxy Watch, ny smartwatch an'ny orinasa koreana Samsung izay tadiaviny hitohizan. no hany safidy tokana eny an-tsena mankany amin'ny Apple Watch matanjaka indrindra avy amin'ny orinasa Cupertino.
Amin'izao fotoana izao tsy nisy sary tafaporitsaka izany dia hampiseho amintsika raha toa ka hitohy hitohy amin'ny an'ny maodely izay eo an-tsena izao ny endrika. Ora vitsy lasa izay, ny vohikala amerikana Samsung, dia namoaka ny sary voalohany an'ny taranaka manaraka an'ny Gear S, izay nantsoina hoe Galaxy Watch.
Ny maha-mivoaka avy amin'ny Samsung azy, tena azo inoana fa tsy niniana natao izany, satria fantatsika rehetra ny tian'ny orinasa resahina rehefa manakaiky ny fampidirana fitaovana vaovao. Ity famoahana ofisialy voalohany ity izay ahitantsika izay ho toetran'ny Galaxy Watch, asehony antsika koa ny nomeraon'ny SM-R800 ary ny SM-R810. Ireo maodely roa ireo dia efa nandalo ny fanamarinana FCC mifanaraka amin'izany.
Ny Galaxy Watch dia hamely ny tsena amin'ny karazany hafa. Ny SM-R800 dia hanolotra efijery 1,3 santimetatra amintsika ary handrefesana 46 mm, raha ny maodely SM-R810, hanana efijery 1,2-inch ary refy 42mm, araka izany dia manamafy fa te hanitatra ny isan'ny mpampiasa liana amin'ny fahazoana ity fitaovana ity ny orinasa ary ny fisian'ny maodely tokana dia tsy mampihemotra azy ireo raha tsy manamarina ireo tombony atolotra antsika izy ireo.
Ao amin'ny pejin-tranonkala nisy ny Samsung Watch, nasehon'izy ireo ihany koa ireo maodely teo aloha fa mandraka androany dia mbola hita eny an-tsena, toa ny Gear S2, Gear S3 ary ny Gear Sport, ity maodely farany ity no navoakan'ny orinasa tamin'ny taon-dasa hanoloana ny Gear S4.
Na eo aza ny fanovana anarana, Galaxy Watch dia hitantana an'i Tizen fa tsy Wear OS toy ny efa re tato ho ato. Ho fanampin'izay, ho tonga amin'ny loko vaovao izy: volamena rose, izay indrindra ilay sary tafaporitsaka tao amin'ny tranonkalan'ny Samsung an'ny Amerikana. Ny daty fanolorana ny Galaxy Watch dia mitovy amin'ny an'ny Note 9, izany hoe, amin'ny 9 Aogositra ary tafakatra an-tsena, dia ny 24 amin'io volana io ihany, ny daty mitovy amin'ny kasaina handefasana ny Galaxy Fanamarihana 9.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny tranokalan'i Samsung dia manivana ny sary ofisialy voalohany an'ny Galaxy Watch
Ny vidin'ny Galaxy Note 9 dia nambara tany Eropa